ညိုညိုသင်း & I | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » ညိုညိုသင်း & I
ညိုညိုသင်း & I
Posted by မြစပဲရိုး on Aug 7, 2015 in 2010/2012/2015 Election, Press Announcements | 22 comments
My Note :::::
* မုန်တိုင်း ကာလ ထဲ သမိုင်းကျန်ခဲ့ အောင်ပါ။
* ဒီချုပ် အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများထဲ မှာ ကျန်သူများ မပါတာ Fair enough ပါ။
* ဒီ အမျိုးသမီး ကို ချန်ခဲ့တာကတော့ လုံးဝကို Fair မဖြစ်ပါ။
* ကိုယ့်ထောက်ခံတာ မှန်မမှန် တစ်နေ့မှာ ဒီ အဖြစ်အပျက် တွေ ကို ပြန်ပြီး လည်ပြန် လှည့်ကြည့်ချင်ပါသေးရဲ့။
* ဒါကြောင့် ဒီစာစု ကို ရေးပါတယ်။
Nyo Nyo Thinn : 06 July 2015
မိတ်ဆွေတော်တော်များများက ကျွန်မကိုမေးကြပါတယ်။ NLD ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် အရွေးမခံရတာဘာကြောင့်လဲတဲ့။ အခုလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲ တစ်သီးပုဂ္ဂလ အနေနဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနဲ့ ယဉ်ပြိင်သွားဖို့ရှိပါသလားတဲ့။ ဒါမှ မဟုတ်ရင် NLD ရဲ့ ပြိင်ဖက်ပါတီတွေနဲ့ သွားရောက်ပူးပေါင်းဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလားလို့ မေးကြပါတယ်။
NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဘာကြောင့် အရွေးမခံရတာလဲ ဆိုတာကတော့ NLD ၏ CEC ကိုဘဲမေးသင့်ပါတယ်။
ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ ကိုယ်သင်ကြားတတ်မြောက်ထားတဲ့ ဥပဒေ ပညာနဲ့ ပြည်သူ့အကျိုးအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်တာခြင်းအတူတူ ပြည်သူချစ်တဲ့ အမေစု ဦးဆောင်မှူ့ အောက်မှာ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်က ပထမ နဲ့
NLD ပါတီပိုပြီးအောင်မြင်တိုးတက်ဖို့က ဒုတိယ ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ထားပြီး၊ NLD ပါတီဝင်မိတ်ဆွေတော်တော်များများရဲ့ ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းချက်ကို လေးစားပြီး NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် လက်ခံပေးဖို့ လျောက်လွာတင်ခဲ့တာပါ။
NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရသူများဟာလည်း ထီပေါက်သလိုပျော်ရွင်နေကြမယ်လို့လည်း ကျွန်မ မထင်မြင်ပါဘူး။ သူတို့တွေဟာလည်းမကြာခင်မှာ ကြီးမားတဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကြောင့် ပင်ပန်းကြရမဲ့သူတွေပါ။
အခုလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲ တစ်သီးပုဂ္ဂလ အနေနဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနဲ့ ယဉ်ပြိင်သွားဖို့ရှိပါသလားဆိုတာကတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ စဉ်းစားနေတုန်းပါဘဲ။
အကယ်၍ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနဲ့ ယဉ်ပြိင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မကို မဲပေးဖို့ မဲဆန္ဒရှင်တွေကို မေတ္တာရပ်ခံတိုက်တွန်းသွားမှာပါ။
အမေစုရဲ့ အရှိန်အဝါက ကြီးမားလို့ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို နာမည်မသိတောင် မဲပေးမဲ့သူတွေက အများကြီးရှိမှာပါ။
ကျွန်မရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ကျွန်မကိုယ်တိုင် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုသာမဲပေးမှာပါ။
ကျွန်မရဲ့ မဲဆန္ဒနယ် မဟုတ်တဲ့ အခြားနယ်တွေမှာလည်း NLD ကိုမဲပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံတိုက်တွန်းသွားမှာပါ လို့ ကျွန်မကိုဝိုင်းဝန် ထောက်ခံကြတဲ့ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးတင်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင် –
Nyo Nyo Thinn : 07 July 2015
ကျွန်မရဲ့ မိတ်ဆွေအများစုနဲ့ ကျွန်မကိုထောက်ခံခဲ့ကြသော ထောင်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူ လူထု၏ (feed back) တိုက်တွန်းပြောဆိုချက်တွေကို လေးစားသောအားဖြင့် ကျွန်မ၏ မဲဆန္ဒနယ်မြေဖြစ်သော ဗဟန်းမြို့နယ် မှ (တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်) ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားအဖြစ် ဝင်ရောက်အရွေးခံရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။
Source from – https://www.facebook.com/nyo.thinn.7
My Note ::::::
* ဒေါ်ညိုညိုသင်း ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အောင်မြင်ပါစေ။
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လဲ နားလည်မှာပါ။ ဒီချုပ် အနေ နဲ့ နောင်အနာဂါတ် မှာ ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုး မှ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ကြပါစေ။
* ဒီချုပ် မှ တာဝန်ရှိသူများ Flexible မလုပ်နိုင်ရင်၊ မလုပ်တတ်ရင် အများနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ အရှုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
လွှတ်တော်ထဲ လူတော် တစ်ယောက် ကို မဆုံးရှုံးစေချင်ပါ။ အစိုးရဖွဲ့ဖို့ ဆိုတာ ဆောက်ဖြစ်မှ ကျောင်းဒကာပါ။ ဗဟန်း အတွက်ကိုတော့ ဒေါ်ညိုညိုသင်း ကို ဘဲ မဲ ပေးကြစေချင်ပါတယ်။
(၁) သူ့ ရဲ့ စေတနာကို အလုပ် နဲ့ လက်တွေ့ပြနေသော အတွေ့အကြုံရှိ ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီး ဖြစ်နေ၍ ဖြစ်သည်။
(၂) သူ့ ဘက်က ညှိနှိုင်းပေးခဲ့သည်။
(၃) ဒီချုပ် မှ တစ်ဇွတ်ထိုးဆရာကြီး များ ရှိနေခဲ့ပါလျှင် သင်ခန်းစာယူ တတ်ရန် ဖြစ်သည်။
ကိုပေါ်တို့ ကေကျူ့တို့သာ ကျောက်စ်တို့ မဲဆန္ဒနယ်ကနေဝင်အရွေးခံ…
မဲပုံးထဲပါ ဝင်ထိုင်ပလိုက်မယ်… ၈၈၈၈ ရဲ့ ဥယျာဉ်မှူးတွေကို သစ္စာရှိဆဲ…
တကယ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပြင်းတဲ့သူကတော့ ဒီနေရာမှာ ၀င်လို့မရရင်
ဒီတစ်ခါတော့ မြ နဲ့ သဘောထားကွဲလွဲတာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
သူ့အကြောင်းအတွင်းကျကျ မသိပေမယ့် ဒီချုပ်က ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းမထွက်ခင် အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ သူပြောတာကို နားထောင်ပြီးကတည်းက သူ့ရပ်တည်ချက်၊ သူ့သဘောထားကို မကြိုက်တော့ဘူး။
အစောကြီးကတည်းက ဒီချုပ်ကမရွေးရင် သူ့အရှိန်အ၀ါနဲ့သူ တစ်ဦးပုဂ္ဂလ၀င်ပြိုင်မယ်လို့လည်း တွက်ပြီးသား။
ကျနော်တို့ အန်တီနဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်—
မဲကွဲမှာ စိုးလို့ ကျနော် NLDက ဝင်ခဲ့တယ်
အခု လည်း မဲကွဲမှာစိုးလို့ ကျနော် တသီးပုဂ္ဂလ လဲ မဝင်တော့ပါဘူး–ကျနော်ရွေးကောက်ပွဲမဝင်တော့ပါဘူး၊၊. ၊၊
NLD က.. ဘယ်သူတက်လာတက်လာ.. လူထုက ဒီချုပ်ပဲ မျက်စိမှိတ်မဲပေးကြမှာပါ..။
ဒီလိုလုပ်တာဟာ.. ဒီအချိန်မျိုးမှာ.. မှန်လည်းမှန်တယ်.. လို့.. ထင်တယ်..။
ပြီးခဲ့တဲ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတုံးက.. ဒီချုပ်နဲ့အပြိုင်ရွေးခံသူတွေတချို့က.. နိုင်ငံရေးအစဉ်အလာရှိတဲ့သူတွေ..ပါတယ်..။
.. နိုင်ငံရေးသတ္တ၀ါတွေရဲ့.. သားသမီးတွေ.မျိုးဆက်တွေပါတယ်..။
NLD က ဦးထွန်းမြင့် … မကြားဘူး ။
ဇောတိက ဦးခင်လှိုင် … တစ်သီးပုဂ္ဂလ … သူက ကိုယ်ရည်သွေးလွန်းတယ်
ဒေါ်ညို ညို သင်း … တစ်သီး ပုဂ္ဂလ ….
ဆိုတော့ ကျွန်တော်သာဗဟန်းက ဆို ဒေါ်ညို ညို သင်း ကိုဘဲ မဲထည့်မှာ။
သူ့လုပ်ရပ် အချို့  မကြို က်ပေမဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကို အလုပ်စေခိုင်းတာမို့ ။
NLD အနေနဲ့ ဘာကြောင့် မရွေးဘူးဆိုတာတွေကို ဘာလို့ ချ မပြ ရဲ လည်းဆိုတာကို အားမရဘူး ။
ဘယ်လို အကြောင်းဖြစ်ဖြစ် ချ ပြ ရဲ ရမယ် ။ ဒေါ်ညိုညိုသင်းတို့ ဦးကိုကိုကြီးတို့ရဲ့ အားနည်းချက် လက်မခံ နိုင်တဲ့ အချက် ရှိလည်း သူတို့ကို အားမနာဘဲ ချ ပြရဲ ရမယ် ။ ချ မပြ တာကို အားမရဘူး။
အခုလိုချမပြ တော့ ယုံထင်ကြောင်ထင် တွေဖြစ်စရာ အများကြီး ။
ထင်သာမြင်သာ တွေ အော်နေကြရတဲ့သူတွေ မှာ NLD ကို ချစ်တဲ့သူတွေမှာ အခုမှ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး လိုဖြစ်နေကြတယ် .. လိုက် ဖာ ပေးနေကြရလို့ ။
မှတ်ချက် ဝင်ပေးသူ အားလုံးဘဲ ကျေးဇူးပါ။
Love you :-))))
ဒီတစ်ခါ ကတော့ 88 မမှီတော့ ဘူး။
နောက်တစ်ခါ ကျရင် NLD အတွက် အတိုက်အခံ ကောင်း တစ်ခု လို နေတာတော့ အမှန်ဘဲ။
နောက် ၅ နှစ် အလွန် မှာ သူတို့ အသက် သိပ်ကြီး သွားပြီ အဲဒီအချိန်မှာ လူငယ်ခြေတက် တွေ ပါ ပါလာမယ်လို့ လဲ မှန်းပါတယ်။
အဲဒီ လူငယ် တွေ ကို လွှမ်းနိုင်ဖို့တော့ ဘက်စုံ ပါဝါ တွေ ရအောင် သူတို့ ကို သူတို့ မြှင့်သင့်ပြီ။
ကိုမင်းကိုနိုင် နဲ့ ကိုကိုကိုကြီး တို့ ရဲ့ စေတနာ ကို မြင်တယ်။
ကိုမြအေး က တော့ ဝင်လို့ မဖြစ်ဘူး ထင်တယ်။
ကျန်သူတွေ က လဲ လမ်းပြတ်ပုံ မပေါ်လှဘူး။
ကျွန်မ ရဲ့ ပါစင်နယ် အမြင်ပါ။
သူ က တကယ်လုပ်ရဲ လို့ဘဲ တစ်ယောက်ထဲ ကြဲခဲ့ပြီဘဲ။ ကျွန်မတော့ သူ့ ကို သဘောကျတယ်။ ကျန်သူ တွေ နဲ့ ပုံစံ ကွဲ တယ်လို့ ထင်းတယ်။
ညီအစ်မချင်း လဲ တစ်ခါတစ်ခါ သဘောကွဲ ရတာ ပျော်စရာပါ။ Love u too :-)))
ဒီလို သဘောကွဲတာ ကို အကြောင်းပြချက် တွေ နဲ့ နှစ်ဖက် ဆွေးနွေးနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးရလာဒ် တစ်ခု တော့ ရလာမှာပါ။
ကို ကိုကိုကြီး တို့ ဒေါက်တာအောင်သူ တို့ရဲ့ အခြေအနေ နဲ့ ဒေါ်ညိုညိုသင်း အခြေအနေ နဲ့ က မတူဘူး။
ဟို နှစ်ယောက် က အခု မှ တစ် က စ ရမှာ။
နောက်ပြီး သူတို့ က အစိုးရ က ညစ်ချင် ညစ် လို့ရသူ တွေ။
ကျွန်မကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြီးရင် ဒေါ်ညိုညိုသင်း ကို သဘောကျတယ်။
ဒီချုပ် က လက်ရှိ အမတ် တွေ ကိုကြည့်ရတာ သူ့လောက်တောင် ဟန် မကျသလိုဘဲ။ သူ့လောက် ဘက်စုံ မဖြစ်ဘူး။
တကယ်တော့ လူ ရွေးခေါ်နိုင်ရင် ဒီ လို လူ တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
အရင် က မလှုပ်ရဲကြလို့ ပါ။
ဒါကြောင့် ကျွန်မ စိုးရိမ် ခဲ့တဲ့ ဒီချုပ် က လူဟောင်း ထဲ သိပ်ပြီး ထက်ထက်မြက်မြက် လဲ မရှိ ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နောက် မှာ ခို နေ သူ တွေ က ဘယ်လောက်သဘောထားကြီး နိုင်မလဲ ဆိုတာကို အရေးကြီး တယ်လို့ တောင် ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
“. နိုင်ငံရေးသတ္တ၀ါတွေရဲ့.. သားသမီးတွေ.မျိုးဆက်တွေ” ဆိုတာ ကတော့ လူ့ရေပေါ်ဆီ အသိုင်းအဝိုင်းက အများစု ပါပါတယ်။
တကယ် တန်းမှာ ပြည်သူတွေ အတွက် ရင် နဲ့ ရင်းပြီး အလုပ် လုပ် မယ်လို့ မမြင်ပါဘူး။
ကျွန်မတို့ ကျောင်းတုန်းက ပညာတတ် ဆရာကြီး/ဆရာမကြီး တွေ အများစု က အထက်တန်းအလွှာ တွေ ကများပါတယ်။
ပြသနာ က သူတို့ Management သင်ချိန် ဒီလောက် အားမပါဘူး။
ရှေးတုန်းက ဖလော်ဆော်ဖာ ဂုရု ကြီး များ ရဲ့ စကားတွေ ကို လက်ရှိ နဲ့ ယှဉ်မပြောရဲကြဘူး။
အဲဒါကိုဘဲ တစ်ခြား ဆရာကြီး များ က သင်ရင် နားထောင်ရတဲ့ အရသာ ကွာသလား မမေး နဲ့။
ဟို တွေ က ဒဲ့ ကို ဝေဖန်ပြတာ။
ဒီ တော့ သိကြ တဲ့ အတိုင်းဘဲ။
အဲဒီ စာသင်ကောင်းသူ Mgt ဆရာကြီးများ မကြာခဏ သတိပေးခံ ရသပေါ့။
ဂရုမစိုက်တော့ ရာထူး ပိတ်ခံရသပေါ့။
သက်တမ်း က မြင့်နေ တာမို့ ကျောင်းအိမ်တွေ ရနိုင်ရက် နဲ့ မပေးဘဲ ဖယ်ထားလို့ သူများ အိမ်နောက် မှာ နေခဲ့ ရတဲ့ ဘဝ တွေပေါ့။
ဒီတော့ အဲဒီ အထဲ က တကယ်ပြောရဲ တာ ၊ ပြည်သူ တွေ ကို စေတနာမပါဘဲ လုပ်စား တာ မျိုး ကို တော့ လုံးဝ မကြိုက်ပါ။
အားနာလို့ နာမည်တွေတော့ မပြောတော့ပါဘူးနော။
ရှင်က တကယ်ဘဲ ရှုံးချင်တာလား။
ကျွန်မကတော့ ဘော်လုံးပွဲလိုမျိုးမှာ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အသင်း ဘက် ကို လောင်းကြေး ထပ်ခဲ့ဘူးတယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အမြတ်ပေါ့။ lol:-))
ကျွန်မ စိတ်ထဲ မယ် မကျေလည်တာလဲ အဲဒီ ပြန်ကြားရေး ကိစ္စပါဘဲ။
ပြသနာ ဆိုတာကတော့ ဖြစ်မှာဘဲ။
အဲဒါ ကို ပညာရှိရှိ နဲ့ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ ဆိုတာ အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်။
နိုင်ငံနဲ့ချီနေတဲ့ အကြောင်းမှာ ပြောချင်တာတော့ ပြောမယ်။ မပြောချင်တာ မပြောဘူး လို့ လုပ်လို့ မရဘူး။
ဒီချုပ် ရဲ့ ပြန်ကြားရေး ကို ကျွန်မ အားမရတာ ကြာပြီ။
ပြည်သူ တွေ ဆီ ကို စေတနာစကား၊ စေတနာ လုပ်ရပ် တွေ အတွက် ပြတ်ပြတ်သားသား ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ချပြ သင့်တယ်။
ကိုယ်က စေတနာမှန်ရင် ပြည်သူ မကြိုက် တဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါစေဦး။
အသေအချာ ရှင်းပြ နိုင်ရမယ်။ ပြည်သူ တွေဝေဖန်တာ ကို တလေးတစား နားထောင်နိုင်ရမယ်။
အဲဒီ ဝေဖန်သံ တွေ ကို တလေးတစား တန်ပြန်ပေးနိုင်ရမယ်။
ကိုယ်မှားရင်လဲ ဝန်ခံပြီး နောက်ဆုတ်ရဲ ရမယ်။
ကိုယ်မှန်ရင်လဲ ပြတ်ပြတ်သားသား ရှေ့ဆက်ရဲ ရမယ်။
ဒါပေမဲ့ ရေငုံနှုတ်ပိတ် မကြားသလို လုပ်ပြီး ရူးချင်ယောင် ဆောင် ရမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒီချုပ်က အဲဒီ ပြန်ကြားရေး တွေ ကို တကယ် လုပ်နိုင်တဲ့ သူ တွေ နဲ့ လဲပစ်ဖို့ တောင် ကောင်း တယ်။
အရေးကြီး ချိန်မှာ သက်လုံမကောင်း ရင် နောက်ချန်ပစ်ခဲ့တာ အကောင်းဆုံးဘဲ။
မဟုတ်ရင် ဖွတ်က ဖာ တွေ လိုဘဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကထူးဆန်း မှတ်ချက် ကို အရောင်ချယ်ပါတယ်။
ကျွန်မ ပါစင်နယ် ကို ပြောရရင်တော့ စနစ် တစ်ခု ပြောင်းဖို့ ကို မူ နဲ့ အရင် သွားလို့ မရဘူး။
တော်တဲ့၊ ထက်တဲ့၊ ကောင်းတဲ့ လူ တွေ ဘဲ စု မှ လွှတ်တော်ထဲ ပါဝါ ပြနိုင်မှာ။
ဒီချုပ် က အမတ်တော့ များပါရဲ့ ဘာမှ အစွမ်းမရှိ လူ တွေ မလုပ်နိုင်ဘဲ ယက်ကန် လိုက် နေ မဲ့ သူ တွေ နဲ့ အစိတ်သား ကို ဘယ်တော့ မှ မကျော်နိုင်ဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သာ ကြားနိုင်ရင် ပြောချင်ပါတယ်။
ကျွန်မ အမြင် ကတော့ ပြည်သူ တွေ အတွက် တကယ်လုပ်ပေးဖို့ အစွမ်းရှိသူ တွေ စု နေတဲ့ အချိန်မှာ တကဲ့ ဒေါင်ဒေါင်မြည် လူကောင်း တွေ ချ မပြ နိုင်ဘဲ နဲ့ တော့ ဒီချုပ် ၁၀၀% လို့ မမှန်းစေလိုပါ။
စနစ် ကောင်းပြင်ဖို့ လူ ဆိုတာ ဒီချုပ် က လူ တွေသက်သက်ဘဲလို့တော့ ကျွန်မတော့ မသတ်မှတ်ချင်ပါဘူး။
တကယ်ထက်မြက်ပြီး ပြည်သူက အားကိုးနိုင်တဲ့ နာမယ်ကျော် လူတစ်ယောက် နဲ့ ဒီချုပ် က သာမာန် လူ နဲ့ ကျွန်မ မလဲပါ။
အဲဒီ လူ တွေ ကို ကိုယ့်အထဲ ခေါ်နိုင်ရင်ခေါ်ပါ။ အဲဒါကတော့ သားရွှေအိုးထမ်း ပေါ့။
မဟုတ်ရင်တော့ လွှတ်တော်ထဲ မှာ သဘောထားပြည့်ပြည့် နဲ့ ပေါင်းလုပ်ကြဖို့ ကြိုးစားပါ။
ဖွတ် တွေ ထဲ မှာတော့ ဘယ်ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အထင်ကြီး စရာ ကို မှ မမြင်ပါ။ ဒီတော့ ပြသနာ မဟုတ်။
သို့ပေမဲ့ တိုင်းပြည် ကို တကယ်စေတနာထား တဲ့ ၊ တကယ်လုပ်ပေးမဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ပုဂ္ဂိုလ် ကောင်း တွေ အတွက် လဲ လွှတ်တော်ထဲ မှာ နေရာ ပေးချင်ပါတယ်။
ဦးခင်လှိုင် လဲ လေကြီးပေမဲ့ ပြောရဲ ဆိုရဲ တာ မို့ မဆိုးဘူး ခေါ်ရမယ်။
သို့ပေမဲ့ နဂို နေရာရှိပြီး ဒေါ်ညိုညိုသင်း နဲ့ ပြိုင်ဖို့မသင့်ဘူး။
သူကတော့ တစ်ခြား ကို သွားသင့်တယ်။
ဒီတော့ လောလောဆယ် တော့ ဒီနှစ်ယောက်ထဲ မို့ ဒီချုပ် ကံကောင်းနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီတော့ ပြောချင်တာ က ဒေါ်ညိုညိုသင်းကလွဲ လို့ တစ်ခြားသူ ဆို ဒီချုပ် ကိုဘဲ မဲပေးကြပါ။ :-))))
မနေ့က ယူအက်စ်ရဲ့.. ရီပါ့ဗလစ်ကန်သမ္မတလောင်း ဒီဘိတ်မှာတော့.. ဒေါ်နယ်ထရမ့်မွှေလိုက်တာ.. ကျန်သမ္မတာလောင်းတွေ… တော်တော်အလူးအလဲပဲ..။
ထရမ့်က.. သူ့ကိုပါတီကမရွေးရင်.. တတိယပါတီထောင်ပြိုင်မယ့်သဘောပြောလိုက်သေး..။
nld အမတ်တွေ %အသာရဖို့ကနံပါတ်တစ်။
တတ်နိုင်ရင် အရီးကွန်မန့်ကိုပါ အစိမ်းချယ်ချင်တာ…
အရီးနဲ့ ကိုထူးဆန်းပြောသွားတာ ထောက်ခံပါတယ်…
ဘွားတော်စုကို လေးစားပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ဒီချုပ် CEC တွေ လုပ်နေပုံက သွေးရိုးသားရိုးတောင် ဟုတ်ရဲ့လားလို့ သံသယဝင်မိတယ် ။ ဘယ်သူလာလာ ဒီချုပ်ကဆိုရင် မဲပေးပါဆိုတာကို လက်သင့်ခံလို့မရဘူး ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ ပါတီ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယှဉ်လာရင် တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးကိုပဲ ဦးစားပေးတာမို့ စေတနာထား အလုပ်လုပ်မယ့်သူပဲ လိုချင်ပါတယ် ။ လက်ညိုးထောင် ခေါင်းငြိမ့် အိပ်ငိုက်နေမယ့် ပုတ်သင်ညိုအမတ်တွေ လွှတ်တော်ထဲရောက်ကုန်ရင် ဟို အစိတ်သားနဲ့ ဘာများကွာမှာလဲ ။ အွန်လိုင်းမှာ စုလော်ဘီ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှူတွေချည်းဖတ်နေရချိန် ဖြစ်သင့်တာကို သမာသမတ်မျှမျှ ထောက်ပြတဲ့ အရီးကို …
“လော်ဘီမြ” လို့ခေါ်ရင် ကျောက်စ်နဲ့တွေ့မယ်… ခိ ခိ
၉၀ တုန်းကတည်းက ဒီဗဟိုဦးစီးဆိုတာကြီးက ချုပ်ကိုင်ထားတာ ၊
ဒေသခံကြိုက်တာကို မရွေးပဲ အပေါ်ကချပေးတဲ့သူ အတည် ဆိုလို့ တသီးပုဂ္ဂလဖြစ်
မဲတွေကကွဲကုန်ပြီး အန်အယ်ဒီ ဝက်ဝက်ကွဲရှုံးခဲ့တဲ့ မအူပင် ၊
ဧရာဝတီမှာ အဲဒီတစ်နယ်တည်းရှုံးတာ ဒေသခံ နဲ့ ဗဟို ကွဲလွဲမှု ရလဒ်ပါပဲ ၊
၂၀၁၂ မှာလည်း ဓနူဖြူ နဲ့ မိတ္ထီလာမှာ ဖြစ်ခဲ့သေးတယ် ၊
အခု ၂၀၁၅ အတွက်လည်း ပခုက္ကူမှာ ကွဲနေပြန်သတဲ့ ၊
ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်သူတွေကို ရွေးမယ်ဆိုတာ ဗဟိုက ချုပ်နေသမျှ ရကြပါဦးမယ် ဒီမိုကရေစီ ၊ ရှင်းရှင်းပြောရင် လူတော်တွေ ဝင်မလာစေချင်တဲ့ ဥာဏ်ဝင်း ၊ ဝင်းမြင့်တို့လိုလူတွေ ဗဟိုမှာ ရှိနေသမျှ အမျှ အမျှ အမျှ
လော်ဘမြီ အော်ကြသီ စော်ဂျပြီ သော်ကညီ…
ဒီမိုကရက် နိုင်ဖို့သေချာတဲ့ နယ်မြေဒိုင်းမှာ ဒီချုပ်နဲ့ အပြိုင်ဝံအရွေးခံဖို့ အားပေးဗာသီ။ ဘယ်မြို့နယ်တွေ နိုင်မည်လဲ…။ အစဉ်အလာရ အားကောင်းပြီး စစ်တပ်မရှိတဲ့ မြို့ပေါ်ဒေသတွေမှာ ဖြစ်ကောင်းသီ။ တနယ်ထဲ အပြိုင်အများကြီးတော့မဖြစ်စေချင်.. ဖြစ်ဖို့ မရှိလည်း ထင်ပါသီ။ တရာမှာ ၇၅% မဲပေးလျင် ၃၇.၅% ရသူ နိုင်မည်မို့ ဖွတ်အပြုတ်နှံခံရမည့် မြို့ပေါ်ဒေသများ (မဲခိုး၊ မဲလိမ်လျင် ချက်ခြင်းသိမည့် နယ်မြေများလည်းဖြစ်) တွင် ဒီမိုကရက် နှစ်ယောက်ရှိလို့ အခြေအနေဆိုးသီ ပြောမြပါဂျောင်း….
ချစ်မမ လဲ အလာသေးဝူး။
ဒီတော့ သများ ဥ ထားတာလေး ကို ဒီ မှာဘဲ ချ သွားပြီ။
WHO rule the RULES?
ပြီးခဲ့တဲ့လ ထဲ မှာ “Yuval Noah Harari” ဆိုတဲ့ အစ္စရေး က ဂျူး သမိုင်းပညာရှင် ပါမောက္ခ တစ်ယောက် ရဲ့ လက်ချာ ကို TED ထဲ မှာ ဖတ်ရတယ်။
လက်ချာ ခေါင်းစဉ်က What explains the rise of humans? ပါ။
လူ နဲ့ အင်မတန်တူတဲ့ ချင်ပန်ဇီ တိရိစ္ဆာန် ဘာတွေကွာလဲ တနည်းပြောရရင် လူတွေက ဘာတွေသာလဲ ဆိုတာတွေ ကို ပြောသွားတာ အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။
အဲဒီ အကြောင်းတွေ ပြောနေရင် လိုရင်းပျောက်မစိုးလို့ ပြောချင်တာ ကို တိုက်ရိုက်ဆွဲပြီး ပြောပါရစေ။
သူ့လက်ချာ ပြီးတော့ အမေး အဖြေ ကဏ္ဍမှာ သူ့ရဲ့ A Brief History of Humankind ဆိုတဲ့ စာအုပ် ထဲ ကအချက် တစ်ချက် အကြောင်း နဲနဲ ပြောပါတယ်။
အရင် စက်မှုတော်လှန်ရေးအပြီး စက်မှုလူတန်းစား လို အသစ် လူတန်းစား ပေါ်လာခဲ့တယ်။
အခု လက်ရှိကာလ မှာတော့ လူ တွေ ရဲ့ အလုပ် နေရာ ဘက်ပေါင်းစုံ အများစု မှာ ကွန်ပျူတာ တွေ တဖြေးဖြေး အစားထိုးလာတာ မို့ လူ တွေမှာ အလုပ်လက်မဲ့ တွေများများလာပြီး class of useless people ဖြစ်လာတာမို့
“လူ အများစု ကို လိုအပ်သေးလား?” ဆိုတဲ့ မေးခွန်း တွေ ပေါ်လာသတဲ့။
အဲဒါကို “မူးယစ်ဆေးတွေသုံးဖို့ နဲ့ ကွန်ပျူတာဂိန်း တွေ ကစားဖို့ တော့ လိုပါတယ်” လို့ ရီပြီး ဖြေထားတယ်။
ဒါပေမဲ့ အနာဂါတ် အတွက်တော့ ကောင်းတဲ့ အလားအလာ မဟုတ်ဘူး လို့လဲ ပြောခဲ့ တယ်။
လူသားတွေ ရဲ့ ဖန်တီးမှု စွမ်းအား ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ဒီ အလုပ်လက်မဲ့ ပြသနာ ဟာ ပိုပိုပြီး တိုးလာမှာ ပါ။
လူတွေ ရဲ့ အရင် နှစ်ယောက် နဲ့ ပြီးရမှကို တစ်ယောက်ထဲ လုပ်လာနိုင်တာတွေ။ အလုပ်သမား တွေ အများကြီး နဲ့ လုပ်ရမှာ ကို တစ်ယောက်ထဲ ကဘဲ လုပ်နိုင်လာတာတွေ ဟာ သာဓကဘဲ။
ဒါပေမဲ့ ဖန်တီးမှု က ရပ်မသွားဘူး။ ပိုပြီး အားကောင်းလာတယ်။
ဒီလိုဘဲ လူသား အင်အား ကလဲ ရပ်မသွားဘူး။ ပိုပြီး တိုးပွါးလာတယ်။
ဒီတော့ လူ တွေအလုပ်မရှိ အောင် ကွန်ပျူတာ စွမ်းအားပိုပို လာချိန် အလုပ်လက်မဲ့ တွေ ပိုပိုပြီး ဖြစ်လာ ရင် အလုပ်လုပ်စရာ မရှိတော့တဲ့ လူ တွေ ကို ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။
အဲဒါဟာ မဝေး တဲ့ အနာဂါတ် က ကမ္ဘာ့ပြသနာဘဲ။
အင်း ကျွန်မတို့ ရွှေပြည်ကြီး မှာလဲ ကမ္ဘာ့မှာလို ဘဲ အဲဒီပြသနာ ရှိနေတာ ကြာပေါ့။
ကွန်ပျူတာ နဲ့ လူ တော့ မဟုတ်ဘူး။
စစ်တပ်က လူ နဲ့ စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းက လူ .
ဒီလိုသာ စစ်တပ်က လူ တွေ ကို စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း တွေ ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးရာ တွေထဲ ထည့် နေရင်တော့ ကြာရင် လူ ကို လူ လို အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ လူတန်းစား ပျောက်သွားတော့မယ်။
လူ ကို လူ လို အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ လူတန်းစား ဆိုတာ က အထက် ကို အောက်က ပြန်ပြီး ဆင်ခြေပေးနိုင်ခွင့် ရှိရတယ်။
အထက် ကနေ အောက်ခြေ အဆင့်ဆင့် ထိ ကို တစ်ဆင့်ဆီ အမိန့်ခံ စရာမလိုဘဲ အာဏာ နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ကို ခွဲဝေထားပြီး ဖြစ် တယ်။
ဒီတော့ ကိုယ့်တာဝန် ဖြစ်လာရင် ကိုယ့် လုပ်နိုင်ခွင့် ကို ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် သုံးပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တာဝန်ယူ လုပ်ရဲ ကြမယ်။
ဒါပေမဲ့ စစ်တပ်က လာရင် ဒီလို စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု နဲ့ အကျင့်စရိုက် တွေ မရှိနိုင်ဘူး။
အထက် က အမိန့်အတိုင်း လုပ်မှ ရန်သူ နဲ့ တွေ့တဲ့ စစ်မြေပြင်မှာ အောင်မြင်နိုင်မယ်။
ဥပမာ တစ်ချို့ ကို ကြည့်ရင်
စစ်တပ် Military မှာ Command & Control Operations Model ရှိရချိန်မှာ စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း Non-military မှာ Collaborative Model
ဒီတော့ အဲဒါကို ကြည့်ရင်
စစ်တပ်က Hierarchical / vertical structure ဖြစ်တယ်။
စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း က Matrix structure ဖြစ်တယ်။
စစ်တပ်က rules of conduct ကို အတိအကျ သတ်မှတ်ထားရတယ်။
စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း က rules of conduct ကို သဘော နဲ့ နားလည်ဖို့ သတ်မှတ်ပေးတယ်။ အတိအကျထက် Frame လို သတ်မှတ်ပြီး ဆီလျော်အောင်ပြန်ပြုပြင် နိုင်တယ်။
စစ်တပ်က roles, rank နဲ့ status တွေ က အသေအချာ ဖော်ပြထားရတယ်။
စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း က flexible ဖြစ်ပြီး တစ်ခု ထဲ အသေ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိဘူး။
ဒါတွေ အပြင် အရေးကြီး တဲ့ ကွဲပြားမှု တစ်ခု က စစ်တပ်က သုံး တဲ့ Language ကို စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း မှာ သုံးလို့ မရပါဘူး။
စစ်တပ် မှ လူကြီး မင်းများ သိသင့်တာ က စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း အတွက် တာဝန်ထမ်း နေတာ ရန်သူ နဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ စစ်မြေပြင် မဟုတ်ဘူး။
ရန်သူ မဟုတ် တဲ့ လူ များ နဲ့ ပူးပေါင်း ပြီး လုပ်ရမှာ။
သူတို့ ကို အမိန့်ပေးခိုင်းလို့ မရဘူး။
အဲဒီ မှာတင် စစ်တပ် က သင်တဲ့ ပညာဟာ စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း အတွက် အုပ်ချုပ်မှု ပညာ မဟုတ်ပါဘူး။
နဂို က စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း မှာဘဲ အလုပ်လုပ်ချင်ရင် စစ်ထဲ မဝင်ပါနဲ့။
စစ်သား က စစ်သား အလုပ်လုပ် မှ အံဝင်ပါမယ်။
ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်မလုပ် ဘဲ နေရာတကာ ပါချင်ရင်တော့ ဖြေရှင်းနည်း တစ်ခု တော့ ရှိတယ်။
civilian ဆိုတာ မထားဘဲ ပြည်သူ လူထု အားလုံး စစ်သား လုပ်လိုက်ကြဖို့ပါဘဲ။
မှတ်ချက် – မည်သူ့ ကို မှ နစ်နာအောင် ပြောခြင်းမဟုတ်။
အမှန်တရား တစ်ခု ကို မမြင်ဘဲ ကိုယ့် အတ္တများ ကို ရှေ့ထားပြီး အုပ်ချုပ်နေတဲ့ နေရာမှာတော့ အဲဒီတိုင်းပြည်ရှိ လူများ ရဲ့ စိတ်ဓာတ် ပိုပိုပြီး အောက်ကျဖို့ ဘဲ ရှိပါတယ်။
ဒီတော့ ပြည်သူများ အားလုံး စဉ်းစား ရမှာက ဘယ်သူ့ ကို ကိုယ့် အတွက် Rules တွေ သတ်မှတ် စေချင်လဲ။
ဘယ်သူ့ ကို ရွေးမလဲ။
Military က လား
Non-military က လား
ဒီ အတိုင်း ထိုင်ကြည့်နေရင်တော့ မတရားတာ ကို အားပေးတာ နဲ့ အတူတူ ဘဲ ဆိုတာ ကိုတော့ သတိရကြပါ။
Voice of James Mint
ဒေါ်စုက ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မကောင်းရင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ပါတီက အရေးယူမယ်လို့ ဆိုတယ်…….. ရွေးချယ်ခံပြီးသွားရင် သက်ဆိုင်ရာ ပါတီကနေ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက အမတ် ဖြစ်သွားတာကို ရုတ်သိမ်းပိုင်ခွင့် ဥပဒေ မရှိဘူး…….. ဒါကြောင့် ဒေါက်တာ မြဥာဏစိုး NDF ကနေ NLD ကို ကူးပြောင်းသွားခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့လွှတ်တော်အမတ် ဖြစ်ခွင့်ဟာ ပျက်မသွားဘူး……..
ပါတီအနေနဲ့ ဂိတ်ဆုံး လုပ်နိုင်တာ ပါတီကနေ ထုတ်ပစ်လိုက်တာ…… ဒါနောက်ဆုံး အဆင့်ပဲ……. လွှတ်တော်အမတ် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တရားစွဲလို့ မရဘူး…… အဲ့ဒိလို ထုတ်ပစ်ပေမယ့် အဲ့ဒိအမတ်က အမတ်အနေနဲ့ ဆက်ရှိနေမှာပဲ……
ပါတီကိုကြည့်ပီး မဲပေးခဲ့သူတွေကို မျက်နှာလွဲ ခဲပစ် လုပ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားမယ်…… ဒေါ်စုဟာ ဒါကို တကယ်ပဲ မသိတာလား၊ ခြေ / ဥ ကို မကျေငြက်တာလား၊ လူကြိုက်အောင် ပြောတာလားတော့ မပြောတတ်ဘူး…….
အမတ်ကို အရေးယူနိုင်တာ Right to Recall ပဲ……. ဒါတောင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မရှိလို့ဆိုပီး တိုင်ထားတဲ့ အမတ်တွေကို လွှတ်တော်နာယကကြီးက ခေါက်ထားတာ ကြာခဲ့ပီ…… Rules of Law ကို တသွင်သွင်ပြောနေတဲ့ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် မသိချင်ယောင် ဆောင်ထားခဲ့တာ….. ခက်တာကလည်း Right to Recall ကို ဖျက်ပစ်ချင်တဲ့ လွှတ်တော်အမတ်က အများစု…….
NLD အမတ်တွေကတောင် Right to Recall က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၁ ရာခိုင်နှုန်းအစား ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း အထက်ကို ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာ မအောင်မြင်လို့……. အောင်မြင်ခဲ့ရင် လွှတ်တော်အမတ်ကို ဖြုတ်ချပိုင်ခွင့် ပြည်သူတွေမှာ မရှိတော့ဘူး ဆိုရမယ် မလွယ်တော့လို့.…….
ပြောရရင် ကိုယ့်လစာတိုးဖို့ အဆိုကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်တင်၊ ကန့်ကွက်သူမရှိ ထောက်ခံပီး ခပ်တည်တည်နဲ့ လစာတိုးယူနေတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်အများစုကို အယုံအကြည် မရှိခဲ့တာ ကြာခဲ့ပီ……
နောက်တစ်ချက်က အဲ့ဒိ အမတ်လောင်းကို ဖြုတ်ချနိုင်ပီ ဆိုပါဆို့ နောက်ထပ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်မခြင်း အဲ့ဒိဒေသ မဲဆန္ဒနယ်ဟာ သူတို့ကို ကိုယ်စားပြုမယ့် လွှတ်တော်အမတ် မရှိတော့ဘူး…… သူတို့ဒေသအတွက် လိုအပ်တာတွေကို တင်ပေးနိုင်မယ့် အမတ် မရှိတော့ဘူး…….
ဒီလို ကိစ္စတွေ မဖြစ်စေဖို့ ဒေါ်စုအနေနဲ့ အစကတည်းက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို အရည်အချင်း ပြည့်မှီသူတွေ၊ အရည်အချင်း အစွန်းအထင်း မရှိသူတွေကို ရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်……. ဒီအချိန်ရောက်မှ အချိန်ကပ်နေလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ပေးရင်တော့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမှာကို သိပြီး ကြိုမပြင်နိုင်တာကို ဝန်ခံလိုက်ရာနဲ့ အတူတူပဲ……
ဖြစ်ပြီးမှ မီးစင်ကြည့်ကတဲ့လူတွေ အုပ်ချုပ်လာတာကို မလိုချင်တဲ့ ပြည်သူတွေဟာ နောက်ထပ် မီးစင်ကြည့်ကမယ့် အုပ်ချုပ်သူတွေ ထပ်ပေါ်လာမှာကို မလိုချင်ကြတာ နားလည်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိတယ်…….
လူပြိန်းကြိုက်စကားတွေနဲ့ နောင်မှ အရေးယူမယ်ဆိုတာဟာ ဥပဒေကို သိသူတွေအတွက်တော့ ဟာသတစ်ခုထက် မပိုပါဘူး……. နောင်မှ ပြင်ဆင်မယ့်အစား အခုကတည်းက မှန်အောင် လုပ်သင့်တယ် ဆိုတာလေး တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်.……
လူမှန် နေရာမှန် ရောက်လိမ့် ဖြစ်လိမ့်နိုးးးးးးး
အဲ့သည့်​ကိစ္စကို ကျ​နော်​က​တော့ ဒီလိုမြင်​တယ်​ဗျ
” မိဘက သင့်​​တော်​တဲ့သူနဲ့ စီစဉ်​တာကို အချစ်​ကို ​ရှေ့တန်းတင်​တဲ့ သားသမီး​တွေရဲ့ မ​ကျေနပ်​သံ ” လို့ ပဲ မြင်​တယ်​ ။ ဒီ​တော့ကာ မိဘ သဖွယ်​ ယုံကြည်​လို့ ပုံအပ်​မယ်​လို စိတ်​ကူးပြီးကာမှ ကိုယ့်​ ​ဖေးဖရိတ်​ အမတ်​​လောင်းမပါလို့ ဒီပါတီကို မဲမ​ပေး​တော့ဘူး ဆိုတာက​တော့ မဖြစ်​သင့်​ပါဘူး ။ ဒီကိစ္စ ဒီ​လောက်​ပဲ ​ကောင်းမယ်​ထင်​ရဲ့ 
အဘနီ ဥပမာပေး ကောင်းလိုက်တာ။
တညား ချစ်မွမွနဲ့ ဆြာနီတို့နောက် လိုက်ပါမယ်…
မိဘက ကောင်းတယ်ထင်ပေမယ့် ပေါင်းရမှာက ကိုယ်လေ ၊
အားလုံးစိတ်တိုင်းကျ မရနိူင်ပေမယ့် ကိုယ်က သင့်တော်မယ်ထင်သူကိုကျ ဘာလို့ ပယ်သလဲဗျာ
နယ်က NLD ဝင်ပြိုင်မယ့်သူတွေ တစ်ယောက်မှ မသိဘူး… မသိလည်း ပေးရမှာပဲလို့ မှန်းထားတယ်.. သိထားတဲ့ တစ်ခြားပါတီဝင်တွေကို တစ်ယောက်မှ မကြိုက်ဘူး..